DR Congo waxay qabanqaabisay tartan loogu talagalay gobolka harooyinka waaweyn ee Afrika oo ah Karateega nabada - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka DR Congo waxay qabanqaabisay tartan loogu talagalay gobolka harooyinka waaweyn ee Afrika...
Magaalada Goma, oo ah caasimadda gobolka Waqooyiga Kivu ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, ayaa martigelinaysa tartankeedii ugu horreeyay ee isboortiga ugu weyn, tartanka karateega oo kulminaya shan dal oo ka kala socda harooyinka waaweyn.
Tartanka saaxiibtinimo ayaa ujeedadiisu tahay sidii kor loogu qaadi lahaa nabad ku wada noolaanshaha & deris-wanaaga gobolka oo ay ka jirto khatarta argagixisadu.
Ciyaartoy Tanzanian ah, Salha Abdallah Zarafi waxay u aragtaa dhaqdhaqaaqan mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee kor loogu qaadayo nabadda iyo midnimada dhallinyarada dhexdeeda.
“Karateegu waa isboorti lagu ciyaaro si nabdoon, marka qof laga adkaado, way is-dejiyaan wax walbana si fiican bay u socdaan, waxa aan halkaan ka sameyno ma ahan dagaal, sababtoo ah ma ciyaarno annagoo xanaaqsan. Ka sokow, aakhirka waxaan wada dhoola-cadeeynaa, waxaas oo dhanna waxay muujinayaan inaan nahay hal. ”
Ciyaaryahanka reer Uganda Martin Emoko, ayaa ku dhiirri-geliyey dalalka deriska ah inay sidoo kale abaabulaan nashaadkan oo kale isagooo u sheegay inay gacan ka geysaneyso kor u qaadista walaaltinimada.
“Waxaan jeclaan lahayn in dalal kale sida Uganda, Burundi ama Tanzania ay abaabulaan tartanka noocan oo kale ah mustaqbalka, waayo halkaan waxaan ka dareemaynaa rabitaanka ah inaan ku wada noolaano kalgacal iyo walaalnimo oo aan dagaal ku jirin.
Tartan goboleedkan oo uu soo qabanqaabiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo hadda ah guddoomiyaha Midowga Afrika, wuxuu ururiyaa dhallinyaro doonaya inay sare u qaadaan saaxiibtinimada iyo nabadda gobolka iyaga oo soo bandhigaya kartidooda.
Alain-Pamphile Mbaka oo ah xoghayaha guud ee Xidhiidhka Karateega ee Kongo “Aynu ku waaninno dhallinyarada tartankan. Tartanka, sidaan ku sheegnay farriinteena, wuxuu leeyahay mudnaan uu isugu keenayo dhallinta dalalkan oo dhan sababtoo ah gobolku Harooyinka Weyni wuxuu dhibane u ahaa xasillooni-darro ay soo abaabuleen xoogag xun iyo argagixiso dhawr iyo toban sano jirsatey. ”
Tartanka Saaxiibtinimo ee Harooyinka Weyn ayaa si rasmi ah u bilowday Sabtidii, Oktoobar 23 -keedii. wuxuu na socon doonaa Muddo 2 maalmood ah, dhallinta dalal kala duwan ka soo jeeda ayaa u tartami doonta abaalmarinta ugu dambaysa oo la yiraahdo “Fatshi” oo uu dhigay Madaxweynaha Jamhuuriyaddu.
Previous articleDumarka Senegal ayaa Sabtidii isugu soo baxay waddooyinka Dakar si ay uga soo horjeedaan isbedelka cimilada.